Ever November: နိုင်ငံတော် သမ္မတကို ရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်က ရခိုင် အရေးအတွက် ဘာတွေ တင်ပြခဲ့သလဲ…….
နိုင်ငံတော် သမ္မတကို ရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်က ရခိုင် အရေးအတွက် ဘာတွေ တင်ပြခဲ့သလဲ…….
Ever November | 7/19/2012 01:54:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
ဒီကနေ့ ဇူလိူင်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် ၁၀ ပါတီက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေက မိမိတို့ရဲ့ လိုလားချက်တွေကို တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီက အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဦးလှစောလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ရခိုင်ကဆိုရင် ကျွန်တော်ပါ။ ချင်း အမျိုးသားပါတီက ဥက္ကဌ ဦးကျော်ဇံ၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီက ဒုဥက္ကဌ နိုင်လှအောင်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီက ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းအိုက်မောင်း၊ ကရင် ဖလုံ စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ဦးစိုးသိန်းအောင်၊ NDF ပါတီကဒေါက်တာ စန်းငြိမ်းနှင့် ဦးခင်မောင်ရွေ၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) က ဒေါ်စန်းစန်းနုနှင့် ဥက္ကဌ ဦးသုဝေ၊ ဒီမိုကေရစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီက ဦးအောင်သန်းနှင့် ဦးမျိုးညွန့်၊ PUP ပါတီက ဦးထွန်းရွေ၊ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကေရစီပါတီက ဦးသန်းဝင်း အားလုံး ၁၃ ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ၅ ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။
Posted by Ever November at 7/19/2012 01:54:00 PM